Ayikapheli iCOVID-19, ngakho asizigade futhi sivikele nomnotho, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Ayikapheli iCOVID-19, ngakho asizigade futhi sivikele nomnotho, kuloba uBusi Mavuso
KUYISHWA ukuthi emva kweminyaka engaphezu kwemibili kwahlasela iCOVID-19 wuhhafu kuphela wabantu abadala abagonywe ngokugcwele. Loku sekuzohlupha thina manje njengoba kuqina ukuhlasela kwaleli gciwane okwesihlanu.
Inselelo yamabhizinisi wukuthi azomelana kanjani nomphumela wokuhlasela kwegciwane okwesihlanu ebe eqhubeka nokugxila ekwakheni kabusha emva kwemigomo yeCOVID-19 ebinqindana iminyaka emibili.
Ngabe kumele izinkampami zizame ukunyusa isibalo sabantu abagomile ngokuphoqa ukuthi abantu bagome futhi nangezinye izindlela? Noma ngabe ezinkampanini baningi abantu abagomile ngabe kumele izinkampani zingabe zisavuma eminye imizamo yeCOVID-19 ezozinqinda?
Akuyona imibuzo okulula ukuyiphendula lena. Kumele sibe nendlela yokuqinisekisa ukuqhubeka nokuphepha ezinkampanini zethu futhi sibe sikhathalele nomphakathi.
Umonakalo odalwe yiCOVID-19 mkhulu. Kunabantu abawu-100 195 abangasekho kanti abawu-3.7 million batheleleka. Bawu-19.6m kuphela abantu abadala abagome ngokugcwele, nokucishe kube wuhhafu wesibalo sabantu abadala.
Nokho awuqhathanise namazwe afana neBrazil (kugome u-77% wabantu), iBangladesh (u-71%) neVietnam (u-80%) futhi kuyacaca ukuthi asikwazi ukucasha ngokuntula izinsizakusebenza ngokuhluleka kwethu ukugoma abantu.
Izindaba ezinhle wukuthi abasengozini kakhulu bavikeleke kangcono, u-70% wabangaphezu kweminyaka ewu-60 ugomile. Kodwa ukufinyelela lapho siyothatha ngokuthi wonke umuntu ugomile noma uvikelekile, phecelezi i-herd immunity, ngathi yinto engeke yenzeke futhi kuzofanele sifunde ukuphila neziqubu zokuhlasela kabusha.
Lesi siqubu sesihlanu singesokuqala lapho singalawulwa khona wumthetho wezinhlekelele. Uhulumeni usushaye umthetho ozowuvumela ukuthi usebenzise inqwaba yemithetho yeCOVID-19 enqindanayo noma ngabe yisikhathi esingakanani ngaphandle kokudinga imvume kangqongqoshe noma umthetho wezinhlekelele.
Loku kuthinta neminye imigomo, hhayi nje iCOVID-19 kuphela. Amandla anjena kulula ukuthi axhashazwe; sizimisele ukuqapha ngeso lokhozi ukuthi asetshenziswa kahle.
Imithetho isike yaphambuka phambilini. Uyakhumbula kuvalwe ukudayisa ugwayi, nesesazi manje ukuthi akwenzanga mehluko ukunqanda ukubhebhetheka kwesifo, kunaloko kwachumisa imboni yogwayi owumbombayi kanti izwe lalahlekelwa yintela ewuR5.8 billion.
Uma sesihlasele ngmandla lesi sikhawu sesihlanu sizodinga ukucophelela ukuthi sivikele impilo yabantu ngaphandle kokuphazamisa amabhizinisi. Osomabhizinisi bazama ukujwayela isimo futhi abaningi baphucula imigomo yabo mayelana nokugoma izisebenzi. Sekukaningi ikhomishini exazulula izinkinga zezisebenzi nabaqashi ivuna abaqashi ngesikhathi kukhona izisebenzi ebezingafuni ukugoma.
Kukhona izindlela zomthetho esezikhombisile ukuthi izisebenzi kumele zigome noma ziveze ubufakazi bokuthi azithelelekile. Kuzodingeka umuntu ahlolwe njalo emva kwamasonto amabili. Nokho futhi abaqashi banelungelo lokubaxosha labo abanqaba ukugonywa.
Umsebenzi womqashi ucacile: kufanele avikele impilo nokuphepha kwezisebenzi.
Uhulumeni naye utotobela ngakhona. Sekuvumelekile ukubuthana kwabantu ezindaweni ezifana nasezinkundleni zemidlalo kodwa kungeqi ku-50% wesibalo leyo ndawo ekwazi ukusimumatha inqobo nje uma abazohlangana bezoveza isitifiketi sokuthi bagomile noma ubufakazi bokuthi abanalo igciwane ngaphambi kokungeniswa.
Ababuthana endaweni evalelekile abakwazi ukweqa ku-1 000, kuthi endaweni evulelekile khona bangeqi ku-2 000 baqhelelane futhi bafake izifonyo.
Ngingathanda ukubona loku kwenziwa nakwezinye izinto, njengoba sibona ukuthi ezindaweni eziningi emhlabeni, yonke into ngisho nasemsebenzini izinto seziyakwazi ukubuyela kokwejwayelekile, inqobo nje uma abantu bezoveza ubufakazi bokuthi bagomile noma abanagciwane.
Njengoba sijwayela siwumphakathi ukuphila naleli gciwane kumqoka ukuthi singaphosi ithawula ngemigomo. Kuseyiyona ndlela ehamba phambili yokunqanda leli gciwane. Bucacile ubufakazi bokuthi ukugoma kuyawanciphisa (noma kungawaqedi nya) amathuba okutheleleka kanjalo nokuthelela abanye. Kuwanciphisa kakhulu amathuba okuthi ugule ubangwe nezibi, nokuphungula umthwalo kwezempilo.
Ukuzama ukusheshisa ukugoma abantu kunzima ngenxa yezinkoleloze iningi lazo eziwumbhedo ofafazwa ezinkundleni zokuxhumana. Kuyangithusa ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bashesha kangaka ukukholwa wumbhedo okhulunywayo.
Sidinga imiyalezo ezokhuluma nabantu ngokuhlukana kwabo, imiyalezo efundisa ngesayensi futhi icacise ngembude egcwele.
Umbiko okhishwe wumNyango wezeMpilo mhla ka-25 ngo-Ephreli, osihloko sithi Covid-19 and Vaccination Social Listening Report, unohla lwezinto ezingelona iqiniso nezingezinye zezizathu abanye babemanqika ukugoma. Enye yezinto ezivelayo wukuthi “ICOVID-19 isiphelile”, ngakho akuseyona into okufanele kukhathazekwe ngayo kakhulu.
Cishe lena ngenye yezinto ezingelona iqiniso eyingozi kakhulu. Ngokusho kweWorld Health Organization “Lusaqhubeka ubhubhane. Igciwane alikafinyeleli lapho sekwaziwa ukuthi lihlasela noma libhebhetheka nini. Lisengadala umonakalo omkhulu.”
Ngo-2020, nokuwunyaka wokuqala wale mithetho eyayiqine kakhulu, umnotho wehla ngo-7%. Asikakadluli lapho njengoba isibalo sabantu abangasebenzi simi ku-35.3%, kuthi esentsha siwu-66.5%.
Nakuba izikhukhula zikuphazamisile ukusebenza kahle kwechweba laseThekwini kodwa sekunesikhathi kunezinkinga kuleli chweba.
Amachweba aseNingizimu Afrika abalwa nangasebenzi kahle emhlabeni. Ukusebenzisa uhlelo lokubambisana kukahulumeni nemboni ezimele kuzoba mqoka ukuphucula amachweba ethu.
Umbiko obheka ukuhlanza amanzi angcolile emva kokuthi edlule ezikhungweni zomasipala nezizimele ezenza lo msebenzi i-Green Drop uveze ukuthi ngaphezu kuka-60% walezi zikhungo zisesimweni esibucayi.
I-Daily Maverick ibike ukuthi kunezikhulu eziwu-65 zomNyango wezaManzi ezithinteka kwinkohlakalo. Akushushiswe masinyane, yicala elibomvu leli.
Kuyathokozisa ukubona abantu abamnyama besungula ama-brand abo, kuloba uNtokozo Biyela
Osomabhizinisi abanasasasa ngosizo lwemali kahulumeni. USLINDILE KHANYILE uyabika